Zimbabwe Opposition Plans Demonstrations Over Economy Next Week – Banaadir weyne
FILE – Opposition leader Nelson Chamisa gestures while addressing a rally of his Movement for Democratic Change (MDC) party in Harare, Zimbabwe, July 11, 2019.
HARARE – Zimbabwe’s main opposition party is planning street demonstrations next week to protest against the government’s handling of the economy, which is mired in its worst crisis in a decade and has plunged most citizens into poverty.
“The national challenges are a result of a governance and legitimacy crisis arising primarily out of the disputed election of July 2018,” national organizing secretary Amos Chibaya said in the notice, seen by Reuters.
Luke Tamborinyoka, the MDC deputy spokesman, confirmed the party had notified the police, adding that “we hope the police will allow us to exercise our constitutional right.”
The MDC does not recognize Mnangagwa’s presidency and maintains that he rigged last year’s vote, charges that the 76-year-old leader denies. Last week, MDC legislators boycotted the mid-term budget statement in parliament because Mnangagwa was present.